ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 20
Maung Nyein Aye – လူထုစိန်ဝင်းကို ကျနော် သိတယ်
လူထုစိန်ဝင်းကို ကျနော် သိတယ် မောင်ငြိမ်းအေး ပုံတူပန်းချီ-မင်းကျော်ခိုင် (ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့ဂ်က ယူတယ်) မနေ့ညက မိုးတော်တော်ချုပ်မှ ဖေ့ဘုတ်ခ်ကို ဖွင့် ရင်ထဲမှာ နင့်သွားတယ်။ လူတစုလို မသိမ်ဖျင်းစေဘဲ လူထုကို ထိန်လင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့ လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ …။ ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ ဆရာ့ရဲ့ကလောင်မျိုး မိုးပေါ်တက်ရှာရှာ မြေသျှိုးပြီးတော့ပဲရှာရှာ တွေ့ပါလိမ့်မယ် အားကြီးကြီး။ ဆရာက အာဏာရှင်ဆိုရင် သိပ်မုန်းတယ် အာဏာရှင်ကလည်း ဆရာ့ကို မချစ်ပါဘူး ဆရာ့မှာ ကလောင်ရှိတယ် အာဏာရှင်မှာ ထောင်ရှိတယ် အကြောက်တရားအောက်မှာ ဆရာ့ကလောင် မဖောက်ပြား ကောက်လည်းကောက်မသွား ထောင်မကြောက်တဲ့ဆရာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာမှတ်ထင် အခါခါဝင် … အခါခါထွက် ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာရှင်ရဲ့သရုပ်အမှန်ကို တော်လှန်ရေးနဲ့ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဆရာ မကြောက်တဲ့ အာဏာရှင်ကတော့ ဆရာ့ကိုကြောက်...
Thit Aung – မုန်တိုင်းခေတ်ထဲက သတင်းစာဆရာ သို့မဟုတ် လူထုစိန်ဝင်း
မုန်တိုင်းခေတ်ထဲက သတင်းစာဆရာ သို့မဟုတ် လူထုစိန်ဝင်း သစ်အောင် ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အဲသည်လို ပြောဖို့ ရေးဖို့ ဆရာ့ကို မကြာခဏ လာအပူကပ်လေ့ရှိသည့် ကျွန်တော်တို့ကို ဆရာက တနေ့တော့ ပြောရှာသည်။ `ငါတို့က ရှေ့ကတက်တက်ပြီး လူမိုက်လုပ် ပြောနေတာကြာပြီ၊ ဒါပေမယ့် နောက်က ဘယ်သူမှမလိုက်လာကြဘူး´ ဟု သူ့ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်သည်။ ဆရာ့ထံသို့ နံနက်ပိုင်းရောက်သွားတိုင်း စာရေးစားပွဲတွင် ထိုင်ကာ စားပွဲမှ စာရေးရာက မော်ကြည့်ကာ တချက်ပြုံး၍ ထိုင်ဟုဆိုလေ့ရှိသည်။ သူ့ရှေ့တွင် အေဖိုးဆိုက် စာရွက်များဖြင့် ရေးသားထားသည့် ဆောင်းပါး အထပ်လိုက်၊ သူ့စာရွက်နှင့် သူသပ်သပ်ရပ်ရပ် စီလျှက်ချထားသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်က သူ့စားပွဲရှေ့တွင် ခေါက်ထားသည့် ခုံကိုယူကာ ထိုင်လိုက်ပြီး မိမိလာရင်းကိစ္စရှိလျှင်...
Dhamma Beri Sayadaw – လူထုဦးစိန်ဝင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည့်အတွက် ၀မ်းနည်းစကား
(ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ) ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၂ လူထုရဲ့ နောင်မျိုးဆက်ပြည်သူတွေအတွက် အသက်ရှင်နေသမျှ လူထုနဲ့အတူ ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ဘုန်းဘုန်းနဲ့ တွေ့စဉ်မှာ ကတိစကားပြောကြားခဲ့တဲ့ လူထုဦးစိန်ဝင်း … လူထုရဲ့ လက်ကျန်မျိုးဆက်တဦးအနေနဲ့၎င်း လူထုအတွက် စိုက်လိုက်မတ်တပ် ရေးခဲ့တဲ့ ဂျာနယ်လစ်တဦးအနေနဲ့၎င်း လူထုအတွက် လုိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆုံးပါးခဲ့တဲ့အတွက် နှမျောမဆုံးဖြစ်မိပါကြောင်း ဓမ္မဘေရီ ဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ (ခေတ္တ ယူအက်စ်အေ) (photo – http://enigmaimages.wordpress.com/2011/04/01/military-democracy-and-tea-with-the-peoples-veteran/ ) No tags for this post. Related posts No related posts.
Maung Yit – လူထုစိန်ဝင်း အမှတ်တရ
မောင်ရစ်၊ ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၂ ဆရာ လူထုစိန်ဝင်း ဆုံးပြီလို့ ဖုံးထဲကို မက်ဆိတ် ၀င်တယ်၊ ဂျီမေးထဲကို တက်စ် ၀င်တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲကို တက်ဂ် ၀င်တယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဆန်းဒေးည သန်းကောင်ယံ၊ ဒီဖက်မှာ ဆန်းဒေးမနက်ခင်း။ သတင်းသမားတွေအတွက် ဆန်းဒေးနဲ့ မန်းဒေးတွေဟာ သတင်းအေးတဲ့အချိန်၊ သတင်းထူး၊ သတင်းဦး အရေးပေါ်ဖြစ်ပြန်ရင်လည်း သတင်းသမားတွေ လူမစုံတဲ့ အားလပ်ရက် ဖြစ်နေတာမို့ ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ တက်သုတ်ရိုက်ရတဲ့ နေ့မျိုးပေါ့။ အဲသည်လို သတင်းတွေ သတင်းသမားတွေ ပါးလျားနေတဲ့ နေ့ (ည) မှာ ဆရာလူထု (ဦး) စိန်ဝင်း ဆုံးတယ်။ ဒီနေ့အတွက် မြန်မာပြည်က စာနယ်ဇင်းတွေအတွက် တုန်လှုပ်သွားတဲ့ သတင်း၊ အားလုံးဟာ ရောက်တဲ့ နေရာတွေကနေ...
Moe Kho – အိမ်ပြန်ချင်သူများ အတွက် ခိုင်ထူးရဲ့သီချင်းကောင်းလေး တပုဒ်
မိုးခုို၊ ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၂ ရေခြား မြေခြားမှာ မိဝေး ဖဝေး ဆွေမျိုးဝေး မိသားစုဝေးနဲ့ အလွမ်းတွေ ရင်မှာပိုက်ပြီး ရုန်းကန်နေကြသူတွေ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပိုပြီးများလာတယ်။ (ဟိုး..အရင်ခေတ်တွေ တုန်းကကတော့ သင်္ဘောသားနဲ့ ပညာတော်သင်တွေလောက်ပဲ ရှိတာ)။ မိုင်ပေါင်း ကုဋေဝေးပါစေ ဆက်သွယ်ရေး ကရိယာတွေက ပိုပီးကောင်းလာတာမို့ (ကမ္ဘာကြီကလဲ တဖြေးဖြေး ပြားလာရုံတင်မက ခွက်တောင် ခွက်ဝင်လာတာမို့) အလွမ်းတွေကို ကုစားချင်သလား အလွယ်ကလေးရယ်။ ခလုပ်တချက် နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ အသံကြားရုံတင်မက ရုပ်ကိုပါ (အရှင်လတ်လတ်) မြင်ရတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ပေါ်နေပြီလေ။ တယောက်နဲ့ တယောက် မြင်ရ ကြားရ အလွမ်းတွေကို ခြေဖျက်နိုင်ကြပြီပေါ့။ အဲ့ဒီလို ချစ်သူတွေ ကြားက အလွမ်း သားသမီးနဲ့ မိဘကြားက...
အရှင်ဝီရသူ ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၂ စာရေးသူအတွက်မူ တခါမျှ ရန်ကုန်ပရိသတ်နှင့် ထိတွေ့ဖူးခြင်းမရှိလေသောကြောင့် ရန်ကုန်ပရိသတ်နှင့် ထိတွေ့ခွင့်ရသည်ကိုပင် ကျေးဇူး တင်ရမည် ဖြစ်ပေသည်။ တရားပွဲများ ဆက်လက်ပင့်ကြရာ အချိန်မရ၍သာ လက်မခံနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အာဖဂန်သံစဉ်မှ မြန်မာသံစဉ်သို့ ပြောင်းသွားသော်လည်း အားပေးမြဲဖြစ်သော ရန်ကုန်ပရိသတ်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရမည် ဖြစ်ပေ၏။ အပြန် လေယာဉ်ပေါ်တွင် တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ (အာဂုံပြန်ဆိုရော၊ ရေးဖြေပါ) အောင်မြင်ခဲ့သူ တိပိဋက အသစ်စက်စက် တိပိဋက ပူပူနွေးနွေးဖြစ်သော တေရသမတိပိဋကဓရ ဆရာတော် ဦးဣန္ဒာစရိယနှင့် ထိုင်ခုံမှာ အတူဆုံဖြစ်ကြပေသည်။ စာရေးသူက ယာအစွန်၊ တိပိ ဋကဆရာတော်က အလယ်ကောင်၊ စီးပွားရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ဝဲအစွန်တွင် အတူထိုင်ကြရလေသည်။ တိပိဋကဆရာတော် ဦးဣန္ဒာစရိယကမိတ်ဆက်ပေး၍ ဝန်ကြီးနှင့်စကား...
စိန်စိန်သူ မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ကျမဖေဖေ၏သေဆုံးမှုတွင် ရက်စက်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြသောသူများသည်လည်း မိဘ၊ မိသားစုဘ၀ မျှော်လင့်ချက်၊ အနာဂတ်ဘ၀ဆိုတာ ရှိကြမှာပင်။ သို့သော် လူသားချင်းစာနာစိတ်၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့စွာ ဖေဖေအပါအ၀င် လူပေါင်းများစွာ၏အသက်၊ မိသားစုဘ၀၊ အနာ ဂတ်ပေါင်းများစွာကို ရက်ရက်စက်စက် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါသောလူတစ်စုသည် အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုလူတစု၏ လုပ်ကြံစွပ်စွဲမှုကို ခံခဲ့ရ သော အမှန်တကယ်နစ်နာသူများစွာထဲကတဦးဖြစ်သည့် ကျမဖေဖေ၏ဘ၀အကြောင်းကို ပြောပြလိုပါတယ်။ ဖေဖေဦးစိန်ကို ၁၉၄၄ ခု၊ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ပဲခူးတိုင်း၊ စစ်ကွင်းမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးသန်း၊ ဒေါ်စောညွှန့်တို့၏ သားသမီး (၆) ယောက်တွင် အငယ်ဆုံးသားပါ။ ကျမအဖွား မေမေကြီးဒေါ်စောညွှန့် ကျမကိုပြောခဲ့သော စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ “ငါ အချစ်ဆုံးနဲ့ အမုန်း ဆုံးက တယောက်တည်း” ဟုပါ။...
Moe Kho - အိမ်ပြန်ချင်သူများ အတွက် ခိုင်ထူးရဲ့သီချင်းကောင်းလေး တပုဒ်
How the monks formed coalition in Burma (1988 - 2007)
မောင်လင်းယုန် (ရှမ်းပြည်) - ” မေမေ့အိပ်မက်”
နေ၀န်းနီ(မန္ထလေး) - ဘဘဦးဝင်းတင် နှင့်နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခြင်း”
K ငြိမ်းချမ်း ● ကဗျာဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း https://t.co/puZEnJgyVr https://t.co/Nch7qTOGXg about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကိုသန်းလွင် ● အိန္ဒိယနှင့် ဒီမိုကရေစီ https://t.co/woPoLum73P https://t.co/zP0ilc009k about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ညီပုချေ – ကြိုးစားပါ သားရယ် https://t.co/jVFfp2qtH1 https://t.co/UfYMaYj7sf about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite